Madaxweynaha Galmudug oo Tababar u Furay Ciidan Kamid Noqonaya Darawiishta Galmudug | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Madaxweynaha Galmudug oo Tababar u Furay Ciidan Kamid Noqonaya Darawiishta Galmudug
Madaxweynaha dowlad gobaleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa tababar u furay ciidamo loo tababarayo in ay qeyb ka noqdaan ciidanka daraawiishta Galmudug, kuwaa oo lagu tababarayo xerada tababarka Indha Qaris oo ku taala duleedka Barri ee deegaanka Docol oo hoostaga degmada Gaalkacyo.
Furitaanka ayaa waxaa ugu horeyn ka hadlay Wasiirka Wasaaradda Amniga ee Dowlad Goboleedka Galmudug mudane Axmed Macalin Fiqi in ciidamada tababarka loo furay ay qeyb ka noqan doonaan ciidamada daraawiishta Galmudug, isagoo intaa ku daray in wixii hadda ka danbeeya mas’uuliyadooda xuquuqeed ay saaran tahay dowlad gobaleedka Galmudug hadeey horay u ahaayeen ciidamo beeleed.
Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa kula dar daarmay ciidamada tababarka loo furay in ay xil iska saartaan mas’uuliyadda saaran ee ay ka mid tahay difaaca dalka, gaar ahaan deegaannada Galmudug kuwaa oo qaarkood gacanta ugu jira cadow loo baahan yahay in laga xoreeyo.
Madaxweynaha Galmudug oo Tababar u Furay Ciidan Kamid Noqonaya Darawiishta Galmudug was last modified: June 12th, 2020 by Admin
Dadka uu soo ritey Coronovirus soomaaliya oo kor u dhaaftay 2500 oo ruux
Dhageyso:-Dood ku saabsan saameynta Covid-19 uu ku yeeshey Dhaqaalaha KGS.
Ciidanka Xoogga Dalka oo khaarijiyay horjoogayaal sare oo ka tirsanaa maleeshiyada Al-shabaab
Dhageyso:-maamulka kgs ayaa ciidamda ku amrey in ay furaan wadooyinka ay godoomiyeen al shabab
Akhriso:- Madaxweyne Farmaajo oo ka qayb galay wada-hadallada heerka sare ee Madasha Iskaashiga Shiinaha iyo Afrika